Home Wararka Gudaha Xasan Sheekh Maxamuud: “Hadafkeenu waa in aan ka gudubnaa Doorasho Dadban”.
Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in hadafka ugu weyn ay Dowladiisu ka leedahay Doorashadu ay tahay ka gudubka Doorasho Dadban.
Waxa uu tilmaamay in culeys iyo caqabado kala duwan oo wadatay Doorashada Dadban lasoo arkay balse xalka keliya uu yahay in Dowladda Federaalka laga gacansiiyo sidii looga gudbi lahaa sida uu hadalka u dhigay Madaxweynaha JFS Xasan Sheekh Maxamuud.
“Dowladnimada aasaaskeedu waa Baarlamaan, Madaxweynaha waala doortaa wuu tagi karaa, wuu is casili karaa laakiin waa in uu Baarlamaan joogo, xitaa Guddoonka waala doortaa balse in Shacabka uu soo doorto Baarlamaan howl aad iyo aad u sahlan ma ahayn, Marka wixii farsamo ah ee naga waxeysmayna Doorashada Dadban ayaa wada, ilaahey idinkiis Doorashada Dadban in aan ka gudubno waa hadafka ugu weyn ee aan leenahay, dhinaca siyaasadda & Dowlad dhisidda ah, waxa aan Dadka Soomaaliyeed ka codsaneynaa & madaxda Soomaaliyeed in ay nala gartaan oo afar sano kaddib aanay dib ugu noqon Hangarkii & meelo lamid ah haddii alle yiraahdo” ayuu yiri MW Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha JFS Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Dowladda Federaalka dedaal xooggan ay gelineyso sidii looga gudbi lahaa caqabadaha siyaasadeed ee Dalka soo maray si loo xoojiyo nidaamka Dowliga loo baahan yahay wadajir iyo garab istaag loo muujiyo.
Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha DFS ayaa sheegay in aanay jirin cabsi ka dhalatay natiijada Doorashada maadaama Musharixiintii kula tartantay xilka Madaxweynaha 10aad ee Jamhuuriyadda ay yihiin Dad waaya-arag ah oo xilal kala duwan Dalka kasoo qabtay.
“Madaxdii tartameysay waxa ay ahaayeen Rag xilal kala duwan Dalka kasoo qabtay oo horay dhowr mar usoo tartamay oo kala guuleysiga kala garanayo, Dadkaas oo dhan khibradda ay leeyihiin waxa ay sababeysaa in aanay colaad qaadin, in ay aad iyo aad u fahamsan yihiin nidaamka Doorasho & micnaha ku jira, sidaas daraadeed dalkeenu cabsi badan oo ka dhalata Doorashadii maanta waxa aan rajeynaa in aanay ka jirin oo Dadku waaya-aragnimo kasbadeen” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha JFS.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay Doorasho ka dhacday Magaalada Muqdisho 15kii May 2022, waxa uu sidaas ku noqday madaxweynaha 10aad ee Jamhuuriyadda, waa Shakhsigii ugu horreeyay labo jeer xilka Madaxweynaha ka qabtay Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh maxamuud Waxa uu ballanqaaday in uu wax ka qabanayo dhinacyada: Amniga, Dhaqaalaha, Hagaajinta Siyaasadda, xiriirka Caalamiga, Dib u heshisiiinta, Doorashada iyo xaaladaha bani aadamnimo ee Dalka ka jira.
Previous articleDowladda Gambia oo maxkamadeyneysa Madaxweynihii hore ee Dalkaas Yahya Jammeh.
Next articleGudoomiyaha ku Fashiliyey Gobolka Hiiraan Cali Jeyte: ayaa yiri “Dadka Hiiraan uma baahna Saabuun & Baaldi yar oo maran”.